Global Day of Prayer for Burma | Calvary Burmese Church
ရာဇ၀င်ချုပ် ဒု စောင် ၇း၁၄-၁၅
၁၄ ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သော ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကို နှိမ့်ချသဖြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကို ရှာလျက် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်လျှင် ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍ သူတို့ကိုချမ်းသာပေးမည်။ ၁၅ ငါကြည့်ရှုမည်။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆုတောင်းသော စကားကို ငါနားထောင်မည်။ ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်ရှိ ခရစ်တော်၌ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးတို့ အား အသင်းတော်၏ အစာရှောင်ဆုတောင်းအဖွဲ့ မှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆုတောင်းရာနေ့ အတွက် အဆက်မပြတ် သံကွင်းဆက်ကဲ့သို့ဆုတောင်းခြင်း (Chain Prayers) ဖြင့် အဖဘုရားသခင် တပါးတည်း သာလျှင် ပေးနိုင်သော ဘုရာသခင်၏ ချစ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စည်းလုံးညွတ်ခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်းများ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှင့်တကွ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးရရှိခံစားလာကြစေရန် အတူတကွဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဆက်ကပ်ပါဝင်နိုင်ငံဖို့ ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ မိမိတို့ တစ်ဦးစီ၌ ဘုရားသခင်ထံမှ လှုံ့ ဆော်ဖော်ပြလာသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆုတောင်းချက်များသာမက အောက်ဖော်ပြပါ ဆုတောင်းချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆွက်၍ ဆုတောင်းပေးစေလိုပါသည်။
ကရာနီမြန်မာ အသင်းတော် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအဖွဲ့ 
မြန်မာပြည်တွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံး၏အကျိုးကို ဘက်စုံမှဆထက်တပိုးဖော်ဆောင် နိုင်သော အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တရားစီရင်မှုနှင့်တကွ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ပီပီပြင်ပြင်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။ြ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော နိုင်ငံရေးနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက် ရေရည်အဓွန့် ရှည်မည့် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တရားမျှတမှု၊ တရားဥပဒေစိုမိုးမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ သာယာဝပြောမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတို့ ကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ငံသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစနစ်များနှင့် မူဝါဒများပေါ်ဖြစ်ထွန်းစေရန်။
အစိုးရနှင့်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် မျက်နှာစုံညီပဏမ ဆွေးနွေးမှုများမှတဆင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အမိမြေ၌ အိုးအိမ်အတည် တကျနှင့် ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရရေး၊ စစ်မက်ဒေများပြန်လည်ဖွံ့ ဖြိုးရေး၊ တန်းတူညီမျှခွင့်ရရေး စသည်တို့ အတွက် ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုစသဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများတွင် ဘုရားရှင်အတူပါရှိရန်
လာမည့်ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ တွင်းကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ – တရားမျှတမှုရှိပြီး၊ ပြည်သူဆန္ဒ နှင့် ကိုက်ညီပြီး အများပြည်သူအကျိုးသည်ပို့ နိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များရွေးချင်တင်မြောက် ခွင့်ရရှိစေရန်
မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ကောင်းမွန်သာယာဝပြောရေးအတွက် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေးဂဏ္ဍအသီးသီးတွင်ဆောင်ရွက်နေသော ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများအားလုံးအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်တော်ကို မသိရှိကြသေးသော ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအတွက်
မြန်မာပြည်နယ်စပ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ခိုလုံနေရသော စစ်ပြေးသူများ အပါအ၀င် တခြားဒုက္ခသည်များ၊ ပြည်တွင်းမငြိမ်းချမ်းသောဒေသများတွင်း အိုးအိမ်းမဲ့ ပြေးလွှားရွှေ့ ပြောင်းခိုအောင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နေရသူများအတွက် (Internally Displaced People)
မြန်မာနိုင်ငံများရှိ မုဆိုးမများ၊ မိဘမဲ့ကလေးများ၊ မတရားသဖြင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရသူများ၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့၊ နာမကျန်း၍ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းနေသူများအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်စုများအားလုံး ဘုရားရှင်၏အလိုတော်နှင့်ကိုက်ညီသော ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်အဖြစ်လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နိုင်ရန်အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျိုးစုအသီးသီးနှင့် ဂိုဏ်းဂဏပေါင်းစုံမှာ အသင်းတော်များ၊ အသင်းတောင်အသီးသီးရှိ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိမိတို့ နှင့်သက်ဆိုင်သော မိဘ၊ မောင်နှစ်မ၊ ဆွေမျိုး၊ မိသင်္ဂဟ၊ ဆရာသမားများအတွက်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဧ၀ံဂေလိသာသနာအတွက် သာသနာပြုနေသောသူများနှင့် ဧ၀ံဂေလိတရားတော်မြတ်ကို သက်သေခံခြင်းကြောင့် နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ချုပ်နှောင်ခြင်းကို ခံရသောသူများတို့ အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံဂိုဏ်းပေါင်းစုံဆုတောင်းရေးရာ ကော်မတီမှ နာယကများနှင့် အဖွဲ့ ဝင်များတို့ အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းသာသနာနှစ် ၂၀၀ ပြည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဓမ္မသဘင်အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဓမ္မပညာတက္ကသိုလ်များ၊ ကျောင်းများနှင့် ၎င်းတို့ တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ယူနေသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများတို့အတွက်
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင်နားညောင်းအဖြေပေးရန်
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘုရားသခင်အုပ်စိုးသောတိုင်းပြည် အသင်းတော် သာသနာအဖွဲ့ အစည်းဖြစ် လာစေရန်
စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းမှုအပါအ၀င် အခက်အခဲတမျိုးမျိုးကြောင့် အမိမြေကိုစွန့် ခွာပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဒူဘိုင်းစသည့် အခြားနိုင်ငံများတွင် ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ဝမ်းစာဖြေရှင်း နေရသော မြန်မာပြည်သူများနှင့် သူတို့ ၏မိသားစုများ၏
UNHCR ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်နှင့် တပါးနိုင်ငံအသီးသီးတွင် အခြေချနေထိုင်ရာတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားငယ်၍၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲကြုံနေရသော မြန်မာပြည်ဖွားမိသားစုများအတွက်
ပြည်ပရောက် ယုံကြည်သူ မြန်မာပြည်ဖွားနှင့် မြန်မာနွယ်ပွားတို့ ၏ အသင်းသင်းတော်အသီးသီး ခရစ်တော်၌သာ၍ ၀ိညာဉ်တော်အားကြီးပြီး အမိမြန်မာနိုင်ငံနှင့် မိမ်ိနေထိုင်ရာနိုင်ငံအတွက် ပိုမိုထွန်းလင်သော အလင်းဖြစ်စေရန်
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့တိုင်းပြည်၏ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းအချိန်ကာလာ၌ပင် အခြေအနေကို မကြည့်ပဲ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစား၍ အားယူကာ ရဲရင့်ခြင်းရှိမည့်အကြောင်း
ကွင်းဆက်ဆုတောင်းအချိန်ဇယား – Chain Prayer Schedule
(March 10, 2012 Noon to March 11, 2012 Noon)
1.Noon – 01:00 PM Sayama Hkun Ja
2.01:00 – 2:00 PM Sayama Ngaik Pui
3.02:00 – 03:00 PM Ma Nyi Ma Lay
4.03:00 – 04:00 PM Ma Mansen
5.04:00 – 05:00 PM Ma Mawchi
6.05:00 – 06:00 PM Ma Bawk Seng
7.06:00 – 07:00 PM Ko Thaungno
8.07:00 – 08:00 PM Sayama Awi Khawm
9.08:00 – 09:00 PM Ma Hkun Shaung
10. 09:00-10:00 PM Ma Neam
11. 10:00 – 11:00 PM Ma Hka
12. 11:00 – Midnight Sayama May Paw
13. Midnight – 01:00 Ma Thida
14. 01:00 – 02:00 AM Dr. Cherry Waing
15. 02:00 – 3:00 AM Ma Naw Hla Kyi
16. 03:00 – 04:00 AM Naw Sway Sway Paw
17. 04:00 – 05:00 AM Aunty Kathi Lone
18. 05:00 – 06:00 AM Aunty Ja Dim
19. 06:00 – 07:00 AM Aunty Seng Hkam
20. 07:00 – 08:00 AM Ma Toe Toe Khaing
21. 08:00 – 09:00 AM Naw Mu Mu
22. 09:00 – 10:00 AM Sayama Marlene
23. 10:00 – 11:00 AM Dr. Seng Ra
24. 11:00 – Noon Rev. Saw Ler Htoo
This entry was posted on March 10, 2012 by thawngno in CBC.